DINIKY NY FO | Fahaiza-miaina |
Anisan'ny mampijaly amin'ny fiaraha-miaina ny tsy fitoviana ara-kolotsaina, indrindra moa fa rehefa tsy afaka ny hifanakalo hevitra intsony. Zavatra tsy dia misy dikany loatra tahaka ny ho lazaiko anareo eto dia mety hanimba ny fiaraha-miaina amin'ny tsy mitovy fomba fisainana...
Malaza aty an-dafy aty hoe mora maniry faka ny afrikana raha vao tonga aty. Dia hoy aho hoe sao mba tsy marina izany? Angamba miankina main'ny tombontsoa sy ny sehatra iainana. Dia ho sanatria ve hoy aho mangidy ovy any an-tanàna no dia aty an-dafy no hikarama varimasaka?...
8 marsa, tantara mitohy! Arahabaina ny Vehi-vavy
Resaka vehivavy sa resaky ny vehivavy sa resa-behivavy? Ny 8 martsa  , na dia vao tamin’ny 1977 aza no nankalazaina maneran-tany ho andro ho an’ny vehivavy, dia mifono tantara sy toetsaina toa zary tandra vadin-koditry ny taranak’olombelona. Ao amin’ny...
Arahaba nahatratra ny taona
Arahabaina nahatratra ny taona. Ny firarian-tsoa ataoko anao dia ny tso-drano izay nasain’ny Tompo ataon’i Mosé (Nb 6, 23-27) tamin’i Aarona sy ny zanany manao hoe : “Hitahy anao sy hiaro anao anie ny Tompo… Hampamirapiratra ny tavany...
Tena mampioron-koditra ny maheno fa indrindra ny mahita ity ady tsy misy farany ity. Vaovao alefan'ny TV Italiana matetika ny fandehanan'ny miaramilany misatro-manga hampandry tany any Liban. Fa inona moa ny Fandriampahalemana? Ara-bakiteny (foto-teny : mandry sy alina ) dia...
Fotoana hirosoan'ny ankamaroan'ny olona amin'ny dingam-piainana manaraka izao fotoana izao... Ho an'Antananarivo manokana, eo amin'ny s ehatry ny fivavahana katolika dia mazàna amin'izao fotoana izao no hirosoan'ireo pretra sy relijiozy amin'ny Sakramenta sy ny Voady... tsy vitsy koa...
Resaka baolina no tantaraiko aminao eto kanefa mampandinika ihany ka mety hanampy antsika amin'ny fanatsarana ny fahaizana miara-miaina. Tamin'ny match Italia vs Australie no nahitako ity : rahefa avy nanome karatra mena an'i Materassi ilay mpitsara dia nimenomenona ny italiana hoe :...
Fahaiza-miaina ( tohiny )
Mora ny miteny hoe : "Mandefera" fa sarotra ny miaina ny "Fandeferana". Valan-dresaka anankiray momba ny maha-tsy azo ravana ny mariazy nataona pretra iray izay no nisintonako ity famakafakana zaraiko aminao ity : "Mandalo 'crise' ny fiainam-panambadiana...
Inona no fepetra tsy maintsy harahina amin'ny fifanakalozan-kevitra? (jereo ny http://harilova.blaogy.com/post/182/1067 ) Araka ny traikefam-piainako, fa koa araka ny fandinihan'ireo mpahany momba ny fifandraisan'ny olombelona dia mila fahamatorana ny fahaiza-miady...
Dia atao ahoana ary ny hangina rehefa fantatrao izao fa anao ny rariny? Ny rariny itompoana mody heloka hoy ny Ntaolo, nefa kosa miankina amin'ny toetran'ny tsirairay ny fahaiza-mangina sy ny fahaizana mandefitra. Tsy misy raiki-pohy azo ampiarina amin'ny fahaiza-miaina satria...
Ny olona efa nanana traik'efa momba ny fiaraha-miaina dia mahatsapa ny fahasarotan'ny atao hoe fiaraha-miaina... indrindra rehefa miaraka amin'ny olona tsy afaka ny hifankahazo noho ny fomba fiainana samy manana ny azy... Ilazako traikefa nahazo ahy ianareo... Niaraka nipetraka tamina...
Rahefa mifanerasera amin'ny hafa isika dia mahatsapa fa misy fomba amam-panao tsy mitovy... Tsy fahampian'ny fanabeazanana ve izany? Ratsy taiza ve ny hafa tsy maharaka ny fenitry ny atao hoe : "Fahaiza-miaina"? Raha jerentsika ohatra ny momba ny fisakafoanana, dia misy ireo fomba...